Ngophuhliso lweThe Times, abavelisi abaninzi bezixhobo zorhwebo bayathanda ukuxhobisa izixhobo zabo kunye neerobhothi ecingweni, bedlala ukubekwa bucala ukukhusela ukusebenza kwesiqhelo koomatshini kunye nokhuseleko lwabasebenzi. Njani malunga ne-aluminium yemizi-mveliso yocingo lwesiko? Kufuneka ilungile! Kwaye ...
Iphrofayili yealuminium yohlobo oluthile lwealuminium alloy extrusion eveliswa ngumzi mveliso osetyenzisiweyo kwimveliso yeprofayile. Iprofayili yeAluminiyam yokufa ngokwezifiso kuthetha ukuba ukongeza kulawo ma-20,30,40,50,60,80,90,100,120 kunye nolunye uthotho oluqhelekileyo lwealuminiyam, iprofayili yengxubevange yealuminiyam nayo ...
Iiprofayili zealuminium ezenziwe ngokwezifiso kufuneka zibeke emngciphekweni
1. Ngaba kunyanzelekile ukuba yenziwe ngokwezifiso? Ukuba ufuna ukwenza ngokwezifiso iprofayili yealuminium kwisakhelo sangaphandle sezixhobo, kuyacetyiswa ukuba ungayenzi ngokwezifiso, kuba iprofayili yesiqhelo yealuminium yifayile ephezulu yesakhelo sealuminium, kwaye zininzi iinkcukacha, ...